၁၀ တန်းကို ရိုးရိုးပဲအောင်ပြီး အသက် ၃၀ မပြည့်ခင် သိန်း ၂ သောင်းလောက် ချမ်းသာနေတဲ့ လူငယ်လေး
June 6, 2022 dokonetwork2021 0
၁၀ တန္းကို ၂၄၀ နဲ႔ ေအာင္ေတာ့ ဘာျဖစ္လဲ? ဘာမွ မျဖစ္ဘူးေလ ၁၀ တန္းကို အမွတ္နည္းနည္းနဲ႔ ေအာင္ၿပီး အသက္ ၃၀ မျပည့္ခင္မွာပဲ သိန္း ၂ ေသာင္းေလာက္ ခ်မ္းသာေနတဲ့ လူငယ္ေလး အေၾကာင္း မဖတ္ဖူးဘူးလား? သူ ၁၀ တန္း ေအာင္ေတာ့ လက္ရွိ ေရပန္းစားေနတဲ့ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းတကၠသိုလ္ ေတြကို တက္ဖို႔ အမွတ္ မမီခဲ့ဘူး။ သူ႔မိဘက အားေပးတယ္ […]
“တစ်တိုင်းပြည်လုံးစစ်မျက်နှာပြင်ဖွင့်ရင်တော့ ဒီနေ့ဖွင့်ရင်နောက် ၁၅ရက်၊ရက်၂၀ဆို တော်လှန်ရေးကပြီးပြီပဲဗျ”ဗိုလ်နဂါးပြောလာ
“တစ်တိုင်းပြည်လုံးစစ်မျက်နှာပြင်ဖွင့်ရင်တော့ ဒီနေ့ဖွင့်ရင်နောက် ၁၅ရက်၊ရက်၂၀ဆို တော်လှန်ရေးကပြီးပြီပဲဗျ” ပုလဲပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်နဂါးနဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းခြင်း -moe joe ဘယ်သူတွေကရိုးသားဖို့လိုနေတာလဲ။စစ်မျက်နှာပြင်အခြေအနေဘယ်လိုရှိမလဲ။မင်းအောင်လှိုင်အခြေအနေဘယ်လိုလဲ။ဒီတိုက်ပွဲကနိုင်ပါ့မလား။စတဲ့အဖြေတွေသိရှိနိုင်ဖို့ မိုးကြိုးသတင်းဌာနက ပုလဲပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်နဂါးနဲ့မေးမြန်းထားပါတယ်။ မေး။ အခုကတော်လှန်ရေးကလအတော်ကြာပြီဆိုတော့ ဗိုလ်နဂါးတို့ အားရပြီလို့ပြောလို့ရသလာစ။ပြောလို့မရသေးဘူးလား။ ဖြေ။ သွားနေတဲ့လူတွေ၊ကြိုးစားနေတဲ့ရဲဘော်တွေအတွက်အားရတယ်ဗျ။ဒါပေမဲ့တတိုင်းပြည်လုံးအတွက် ကြည့်ရင်တော့တော်တော်ကိုအားမရသေးဘူးဗျ။ပါဝင်မှုကနည်းတယ်။ပါဝင်နေတဲ့လူတစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုတော့ ငွေပဲပါပါ၊လူပဲပါပါအားရတယ်။ ကျန်နေသေးတယ်။လွတ်လပ်ရေးကို လိုချင်နေပြီးတော့ ပါးစပ်လောက်ပဲ ပါရင်PDFပဲလို့ရောပြီး အမည်ခံနေတဲ့လူတွေရှိနေသေးတယ်။ အဲဒါကတော့ ကျွန်တော်လက်မခံဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ပါးစပ်လောက်ကတော့ ဘယ်သူနေနေလုပ်နိုင်တာပဲလေဗျာ။ပါးစပ်နဲ့ဆန့်ကျင်တယ်ဆိုတာလောက်ကတော့၊ဒီအချိန်မှာ ပါးစပ်နဲ့မရလောက်တော့မှ အသက်တွေ စွန့်တိုက်နေရတဲ့အချိန်မှာ ပါးစပ်လောက်နဲ့ဆိုတဲ့သူတွေကို အားမရသေးဘူး။ ဒါပေမဲ့ပါဝင်နေတဲ့လူတစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုအားရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ […]
အညာကရွာတွေကို စစ်ကောင်စီတပ်လိုက်လံမီးရှို့နေခြင်းအပေါ် ကာကွယ်ရန် အမှတ်(၁)စစ်ဒေသနှင့် ညှိနှိုင်းနေကြောင်း NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးပြော
အညာကရွာတွေကို စစ်ကောင်စီတပ်လိုက်လံမီးရှို့နေခြင်းအပေါ် ကာကွယ်ရန် အမှတ်(၁)စစ်ဒေသနှင့် ညှိနှိုင်းနေကြောင်း NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးပြော ▪️စစ်ဒေသ၏စုဖွဲ့မှု၌ စစ်ရေးခေါင်းဆောင်အဖြစ် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဘက်က တာဝန်ယူထားဟု အသိပေး သန်းဆင့်/People’s Spring အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီတပ်သည် အညာဒေသရှိ ကျေးရွာများကို နေ့စဉ်ရက်ဆက်ဆိုသလို မီးရှို့မှုများ ပြုလုပ်လျက်ရှိနေခြင်းအပါအဝင် ပြည်သူလူထု အား ကာကွယ်နိုင်ရန် မြန်မာနိုင်ငံ အထက်ပိုင်း အမှတ်(၁) စစ်ဒေသ တာဝန်ရှိသူများနှင့် ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းနေကြောင်း အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ(NUG) ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးရည်မွန်က ပြောကြားသည်။ […]
“သာအေး မကလို့ သာအေးအဖေအိမ်ဖြစ်ပါစေ။ အကုန်သာရှို့”ဟုဆိုကာ စစ်တပ်က မီးရှို့သွား
ဘုတလင်၊ ချောင်း၀ကြီးရွာရှိ စစ်ကိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း၊ ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်း သာအေး၏ ညီမ ဒေါ်မြမြအိမ်ကို စစ်တပ်က မီးရှို့၊ ဗိုလ်ချုပ်သာအေးပုံ ချိတ်ထားသော်လည်း “သာအေး မကလို့ သာအေးအဖေအိမ်ဖြစ်ပါစေ။ အကုန်သာရှို့”ဟုဆိုကာ စစ်တပ်က မီးရှို့သွား ရန်ကုန်၊ မေ ၁၈ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မုံရွာခရိုင် ဘုတလင်မြို့နယ်မှာ အရင်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်း သာအေးရွာဖြစ်တဲ့ ချောင်းဝကြီးကျေးရွာကို ဒီနေ့ ဇွန်လ ၆ ရက်နေ့ စစ်ကောင် စီတပ်တွေက ဒုတိယအကြိမ် ထပ်မံမီးရှို့ခံခဲ့ရပြီး သာအေးရဲ့ […]
အညာရထားဟာ ဥသြသံပေးနေပြီးလွတ်မြောက်နယ်မြေဆီ မောင်းနှင်နေပြီခရီးတွင်နေပြီ လိုရာခရီးအတွက် ကျွန်တော်တို့တွေ ပါဝင်ပေးရမယ်။
စစ်ကိုင်းရေ… မင်းမြေမှာ သူရဲကောင်းတွေပဲမွေးခဲ့လေသလား။ ငြိမ်မခံဘဲ တော်လှန်လို့ရတဲ့အကျိုးဆက်က..ပိုင်ဆိုင်မှုတွေ ပြာကျ အညွန့်အဖူးတွေ မြေချ။ဒါတောင် မင်းမြေမှာ တော်လှန်ကြတုန်း။ စစ်ကိုင်းရေ… မင်းမြေဟာ သမိုင်းအသစ်တွေ ရေးနေပြီ။သစ္စာမြင်းကို ဒုန်းစိုင်းရင်း လွတ်မြောက်ခရီးဆီ ဦးတည်နေကြပြီ။ရိုးသားတဲ့ အညာသူ အညာသားတွေဟာ ဒီခရီးမှာ ယုံကြည်စွာ လိုက်ပါနေကြပြီ။ စိတ်ပိုင်းဖြတ်မှုဟာ ပြတ်သားကုန်ကြပြီ။ လွတ်လပ်တဲ့ နယ်မြေအသစ်ဆီ ခရီးနှင်နေပြီ။ စစ်ကိုင်းရေ… မင်းမြေမှာ တော်လှန်ပန်းတွေ ဆွေးဆွေးနီ နေပြီ။ အညာနွေဦးမှာ စစ်အရူးတွေ ကြောက်ဒူးတုန်နေပြီ […]
မုံရွာကအလယ်တန်းကျောင်းအုပ်ဆရာမတစ်ဦး သေနတ်နဲ့ပစ်ခတ်ခံရပြီး‌ေ.သ ဆုံး ——————— ဇွန် ၆၊ ၂၀၂၂ စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ မုံရွာမြို့နယ် စည်သာကျေးရွာအခြေခံပညာအလယ်တန်းကျောင်းခွဲက ကျောင်းအုပ်ဆရာမ ဒေါ်စိုးမြတ်မင်းဟာ လမ်းမှာသေနတ်နဲ့ပစ် ခတ်ခံရပြီးသေဆုံးသွားတယ်လို့ ဒေသခံတွေကဆီကသိရပါ တယ်။ အသက်(၄၄)နှစ်အရွယ်ရှိ အလယ်တန်းကျောင်းအုပ်ဒေါ်စိုးမြတ်မင်းဟာ မုံရွာ-အရာတော်ကားလမ်းအနီးမှာ မနေ့ကဇွန်(၅)ရက်မှာ ပစ်ခတ်ခံရပြီးသေဆုံးသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ သေဆုံးမှုနဲ့ပက်သက်ပြီး အမည်မဖော်လိုသူဒေသခံတစ်ဦးက “သူကျတာက မြို့သစ်ရပ်ကွက်ကနေ စည်သာကျေးရွာဘက်ကိုသွားတဲ့ဘက်မှာ။သူကNon CD Mဆရာမလည်းဖြစ်တယ်။ကျောင်းဖွင့်ဖို့အသွားလမ်းမှာအပစ်ခံရတာ။သူကစစ်ကောင်စီအနေနဲ့ကျောင်းဖွင့်ဖို့ ကျောင်းတက်ဖို့ ကျေးရွာလေးတွေမှာဖိအားလိုက်ပေးနေတာရှိတယ်။အဲ့ဒါအပစ်ခံရတာ။နဂိုထဲကလည်း ကျောင်းဆရာမတွေ၊ဆရာတွေ ကျောင်းဖွင့်တဲ့နေရာမှာမပါဝင်ကြဖို့ CDMလုပ်ကြဖို့ အတိအ လင်းသတိပေးထားတာလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ […]
ကံဖျားရွာသားများကို စကစတပ်ဖွဲ့က ပြေးခိုင်းပြီး အမဲလိုက်သလို ပ.စ်သ.တ်
ကံဖျားရွာ အရပ်သားများကို စကစတပ်ဖွဲ့က ပြေးခိုင်းပြီး အမဲလိုက်သလို ပစ်သတ်တာကြောင့် ၄ဦးသေဆုံး၊ ရွာသူ/သား အများစုကို ဖမ်းဆီးထားကာ တောရကျောင်းနှင့် လူနေတဲများကိုမီးရှို့ ■ မြင်းမူမြို့နယ် ကံဖျားရွာကို စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ ဝင်ရောက်လာပြီး မီးရှို့ကာ အရပ်သားများကို ပစ်သတ်မှုများပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီကနေ့ နေ့လယ် ၁:၃၀နာရီအချိန်က ထီးဆောင်းရွာမှ ကန်ဖျားရွာဘက်ကို စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ အင်အား ၈၀ ဝန်းကျင်နဲ့ ဝင်ရောက်လာပြီး ကံဖျားရွာတောထဲက တဲများကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးကြပါတယ်။ ကံဖျားရွာသားများရဲ့ ဆိုင်ကယ်ကို တွေ့ရှိပြီး […]
Myanmar Idol အဆိုတော် ဇင်ကြီး ေ-သန-တ်နဲ့ ပ-စ်-ခ-တ်ခံရ၊
Myanmar Idol အဆိုေတာ္ ဇင္ႀကီး ေ-သန-တ္နဲ႔ ပ-စ္-ခ-တ္ခံရ၊ ဒဏ္ရာျပင္းထန္တယ္လို႔ေျပာ ရန္ကုန္၊ ဇြန္ ၆ ေျမာက္ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္မွာ မေန႔ကညက ေ-သန-တ္နဲ႔ ပ-စ္ခ-တ္ခံရသူဟာ Myanmar Idol Season2ရဲ႕ အဆိုေတာ္ ဇင္ႀကီး ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ေျမာက္ဒဂုံ၊ ၃၇ ရပ္ကြက္၊ ဧကရာဇ္ဟိုတယ္ေဘးက အလုပ္သမားတန္းလ်ားမွာ အဆိုေတာ္ ဇင္ႀကီး ရွိေနစဥ္အခိုက္ လူ ၄ ဦးက […]